အာရောဂြံ ပရမံ လာဘံ
သထုံရာဇဝငျပါအကွောငျးအရာတို့သညျ ခတျေပွိုငျ ကြောကျစာလညျးမဟုတျ၊ သမိုငျးမှတျတမျးလညျးမဆိုသာ ၊ ဒဏ်ဍာရီပါ အကွောငျးအရာတို့ကို သမိုငျးနညျးဖွငျ့ အခြိနျကာလ၊ နရောဒသေနှငျ့ အဖွဈအပကျြမြားကို ထုတျနှုတျပွီးဆနျးစဈ တငျပွပါမညျ။အခြိနျကာလအားဖွငျ့ ဗုဒ်ဓခတျေနှငျ့ ဗုဒ်ဓလှနျခတျေ အကွောငျးတို့ပါဝငျနသေညျ။ သုဝဏ်ဏဘူမိ သထုံပွညျကို ဗုဒ်ဓမွတျ စှာမပှငျ့ခငျက တညျထောငျခဲ့သညျဆိုထား၏။ တဖနျ သိကွား ၊ ရသေ့ ၊ ဝိဇ်ဇာဓိုရျ တို့တညျထောငျခဲ့သော ပထမ နှငျ့ ဒုတိယ သုဓမ်မ ဝတီ တို့သညျလညျးပါဝငျလရော မွို့ရိုးခုနှဈထပျ ကြုံးခုနှဈထပျဖွငျ့ တညျပေးခဲ့သညျဟုမှတျသားဖှယျရာ တှရေ့သညျ။ထို့ပွငျသထုံမွို့တှငျ မွို့ရိုးအထပျထပျဖွငျ့ တညျထား သောမွို့ဟောငျးရာမြားကို ကောငျးကငျဓါတျပုံမြားမှ ရှာဖှတှေရှေိ့ထားပသေညျ။ဥပမာ ကြိုက်ကရာ မွို့ဟောငျးအရာဆို လြှငျ မွို့ရိုးခုနှဈထပျထကျမနညျး ရှိသညျကိုတှနေို့ငျပါသညျ။ ဇုတျသုတျမွို့ဟောငျးတှငျလညျး မွို့ရိုးအထပျ မြားပါသညျ။ ဤ မွို့ဟောငျးနှဈမွို့မှာ အရှယျအစား မသေးငယျလှပေ။မွို့တညျရာအနအေထားကလညျး ကောငျးသညျ။ ကြိုက်ကသာ မှာ စဈတောငျးမွဈဝတှငျရှိပွီး ဇုတျသုတျမှာဘီးလငျးမွဈဝ တှငျရှိသညျ။ရှေးဟောငျး အဆောကျအအုံ နှငျ့ ယဉျကြေးမှုလကျ ရာ အကွှငျးအကနျြ မြားတှရှေိ့ရပါသညျ။
ဒုတိယ သုဓမ်မဝတီမွို့သညျလညျး မွို့ရိုး ခုနှဈထပျ ကြုံး ခုနှဈထပျ ဖွငျ့တညျခဲ့သညျ။ တညျထောငျခြိနျကို မသိရပေ။ဗုဒ်ဓဘုရား မပှငျမီ ဟုသာမှတျရသညျ။ မွို့တညျသော နရော မှာ ရသနှေ့ဈပါးသီတငျးသုံးရာတောငျနှဈခုကွား ဟုဆိုပွီး ထိုမွို့ အတှကျ မွို့ဟောငျးရာ အတညျမပွုနိုငျသေးပေ။
တတိယ သုဓမ်မဝတီမွို့သညျလညျး တညျထောငျသညျ့ ရကျစှဲ မသိရပေ။မွို့တညျသောနရောမှာ ယခုသထုံမွို့ အရှေ့ ကျ တောငျတနျးကွီးမှ ဂေါ့တောငျ၏မွောကျဖကျအရပျ ဟုဆိုထား သညျ။ယခုသထုံမွို့အနီးဝနျးကငျြဖွဈသညျ။ အစနှဈနှငျ့ အဆုံးနှဈ ကိုမသိ၍ မွို့ဟောငျးရာကိုလညျး အတညျမပွုနိုငျပါ။
စတုတ်ထ သုဓမ်မဝတီမွို့သညျ တတိယ သုဓမ်မဝတီမွို့နရောမှာပငျ အသဈထပျမံတညျသောမွို့ ဖွဈပါသညျဥကပေါကျသောလူသား အကွောငျးပါဝငျ၍ ဒဏ်ဍာရီဆနျပါသညျ။ မွို့တညျခြိနျကား ဗုဒ်ဓ ပှငျ့ခြိနျနှငျ့ တိုကျဆိုငျပါသညျ။အိန်ဒိယ ကမျြးစာမြားတှငျ မပါဝငျသော ဂဝံပတိ ရဟန်တာ အကွောငျးပါဝငျနေ၍ သုတသေန အမွငျတှငျပွောစရာဖွဈနပေါသညျ။ သို့သျော ဂဝံပတိ ရဟန်တာ၏ အမညျ သညျ အိန်ဒိယတှငျမထငျရှားလှပေ ။ပုဂံခတျေမူလထိုး ကြောကျစာတခပျြတှငျတော့ ဂဝံတိ ရဟန်တာအမညျပါရှိသညျ။အောကျမွနျမာနိုငျငံ၊ သထုံဒသေ တှငျမတော့ ဂဝံပတိ ရဟန်တာသညျ ၎င်းငျးပငျ့ဆောငျလာ၍ ယနတေို့ငျ ကိုးကှယျ နကွေ သော သှားတျောဓါတျတျောမြား ၊ ဗုဒ်ဓ ဆံတျောမြား ကွောငျ့ ဖယျထုတျ၍မရ နိုငျသော သမိုငျးဝငျပုဂ်ဂိုလျပငျဖွဈ သညျ။
ရှေးဟောငျး သုတသေနအမွငျနှငျ့ဆိုလြှငျ ဤစတုတ်ထ သုဓမ်မဝတီ မွို့သညျ မွိုရိုး(၇) ထပျ ကြုံး(၇) ထပျ နှငျ့တညျသညျ။တညျသောခုနှဈကို အတိအကသြိရသညျ။ မွို့တညျစဉျကာလ အတှငျး သမိုငျးဝငျအဖွဈအပကျြ မြားစှာရှိခဲ့သညျ။သထုံနယျမှ ဆံတျောစတေီ(၁၅) ဆူ၊ သှားတျော ဓါတျစတေီ(၁၁)ဆူ၊ အမညျထငျရှားလကျြ ယနတေို့ငျတညျရှိနသေညျ။ ထို့ပွငျ သုဝဏမငျးကွီး တညျထားခဲ့သော ရှစောရံစတေီ၊ မွသပိတျစေ တီ၊သရကလြာဏီကုနျးစတေီ၊ ဇံသီးစတေီ၊ နနျးတျောဦးစတေီ၊ ရဟန်တာတိုကျတျောစသညျ့ အဆောကျအအုံမြား ယနတေို့ငျတညျရှိနသေညျ။ဤသညျတို့မှာ ရှေးဟောငျး သုတသေန နညျးဖွငျ့ စူးစမျး လလေ့ာအဖွရှောရမညျ ဖွဈသညျ။သထုံမွို့ဟောငျး မှမွို့ရိုးဟောငျးမြားကိုလညျး ဘီစီ-၅၈၂ တှငျ တညျခဲ့သလောဟု စနဈတကြ စူးစမျးလလေ့ာ ဖျောထုတျသငျ့ ပါသညျ။
ပဉ်စမ သုဓမ်မဝတီမွို့(ဥပဒဝေမွို့)သညျ မွမြေိုသှားသော မွို့ရာ ဟောငျး၏တောငျဖကျ ကပျလြှကျ မွို့ရိုးသုံးထပျ ကြုံးသုံးထပျ ( ယခု သထုံမွို့ဟောငျးနရော)တှငျတညျထား သညျဟုဆို၏။
ဆဌမ သုဓမ်မဝတီမွို့( ဓညဝတီမွို့ )သညျယခု မုတ်တမ မွို့အနီး တှငျ ရှိသညျ။ပဲခူး၊ ဟံသာဝတီ၊ တို့ကိုထူထောငျသော သမလ နှငျ့ ဝိမလ မငျးသားတို့၏ မှေးရပျဇာတိ လညျးဖွဈသညျ။ သထုံ နှငျ့ ပဲခူး ခတျေပွိုငျထှနျးကားခဲ့ပုံကိုလညျး လလေ့ာနိုငျသညျ။ သုတသေန ပွုသငျ့သော မွို့ဟောငျးနရောဖွဈသညျ။
သတ်တမ သုဓမ်မဝတီမွို့ ( မရိုကျသဖုံးမွို့ ) ၊ အဌမ သုဓမ်မဝတီမွို့( ရှလေောငျးမွို့ )၊ နဝမ သုဓမ်မဝတီမွို့တိုကျကလား ( ဝငျးက ) ၊မူလ သုဓမ်မဝတီမှ မွောကျဖကျသို့ ခှဲထှကျသှားသညျ။ မရိုကျသဖုံး နှငျ့ ရှလေောငျးမွို့တို့သညျ တညျတံ့ခြိနျတိုတောငျး၍ မထငျရှား လှသျောလညျး နရောမှာထငျရှားရှိသညျ။မရိုကျသဖုံး မွို့ဟောငျးမှ မရမျးကုနျး ကတိုကျကွီး ကတိုကျကလေး တို့သညျ မွနျမာပွညျတှငျ ထူးခွားသော ထငျရှားသော မျွို့ဟောငျးရာမြား ဖွဈကွသညျ။ အရှယျအစားသေးငယျသျောလညျး မွို့တညျပုံ ဆနျးပွားသညျ။ ကတိုကျကွီး ကတိုကျကလေး တို့သညျ ဇုတျသုတျနှငျ့ ကြိုက်ကသာ မွို့ဟောငျး တို့နှငျ့ တူလှစှာ ခွဖေဝါး ( ပါဒ ) ပုံမြိုး ရှိ၍ဆနျးသညျ။
တိုကျကလား ( ဝငျးက ) မွို့ဟောငျးမှာ အရေးပါသော မွို့ ဖွဈသညျ။ ထိုမွို့တှငျ သီရိမာသောကမငျးလကျထကျ တှငျ မဇ်စြိမဒသေ ၊ ပါလိပုတ်တရ မွို့မှ သာသနာပွု ရဟနျးတျောမြား အရှငျသောဏ နှငျ့ အရှငျဥတ်တရတို့ ကွှရောကျလာကွောငျး ပဲခူး ကလြာဏီ ကြောကျစာ၌ ရေးထိုးခဲ့သောကွောငျ့ သမိုငျးဆရာမြား အမြိုးမြိုး ဝဖေနျ သုံးသပျလကျြ ရှိသော ပွဿနာလညျးဖွဈသညျ။ မွနျမာ နိုငျငံ အစောဆုံး ရှေးဟောငျးသုတသေန ပညာရှငျ ဒေါကျတာ အီးဖျောခမျးမား ကအရေးတယူ ပွု၍ ၁၉၇၆ မှ ၁၉၇၈ အတှငျး ကုနျးပေါငျး (၆) ကုနျးအား ရှေးဟောငျးသုတသေန နညျးဖွငျ့ တူး ဖျောသုတသေနပွုခဲ့သောမွို့ဟောငျး ဖွဈသညျ။ဘီစီ-၃၃၆ မှ ဘီစီ-၉၄ ထိ မွို့သကျပေါငျး (၂၄၂) နှဈဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ဒဿမ သုဓမ်မဝတီမွို့ သုဝဏ်ဏဘူမိမွို့ မှာ အရေးအပါဆုံးသော မွို့ဖွဈသညျ။ဘီစီ-၉၄ မှ ဘီစီ - ၁၀၅၇ အထိ နှဈပေါငျး ၁၁၅၀ နှဈတိုငျ တညျတံ့ခဲ့သော မွနျမာ့ သကျတမျးအရှညျကွာဆုံး ရှေးမွို့တျော ကွီးဖွဈသညျ။ မငျးဆကျပေါငျး (၄၈) ဆကျအုပျစိုးခဲ့ပွီး မွို့နရော အတိအကြ ရှိ၍ မွို့ဟောငျးရာ ကြုံးရာ နနျးတျောကုနျးဟောငျး မြား အထငျအရှားရှိသညျ။ရှစောရံ ၊ပိဋကတျတိုကျ ၊ဖောငျတျောဦး ဘုရား ၊သိကွားဘုရား၊ ကလြာဏီကြောကျစာ၊ ရှေးဟောငျး ကြောကျစာတိုငျ အကွှငျးအကနျြမြား သညျ ယခုသထုံမွို့သဈ နရောတှငျ ရှိနသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ သထုံတှငျ မတငျမကြ ပွဿ နာပေါငျး မွောကျမြားစှာရှိနသေညျ ။ ရှေးဟောငျးသုတသေန တူးဖျောနညျးမြားဖွငျ့ စနဈတကြ ဖျောထုတျနိုငျရနျလိုအပျလကျြ ရှိပါသညျ။
ခတျေပွိုငျအယူအဆ နှငျ့ ထိုငျးတို့၏ သုဝဏဘူမိ။
မှနျတို့၏ အိမျနီးခငျြးဒသေ ထိုငျးနိုငျငံသညျ ရှမျးရိုးမ၊ ဒေါန တောငျတနျးနှငျ့ တနင်ျသာရီ တောငျတနျးတို့၏ တဖကျတှငျရှိ၍ ရမွေေ အနအေထား ကှာခွားမှုမရှိလှပါ ။လကှေယျဖကျ ရောကျရှိ နေ၍ မုတ်တမပငျလယျကှတှေ့ငျရှိသော သထုံဒသေ ထကျ မုတျသုံမိုး ထကျဝကျခနျ့ လြော့နညျး သညျ။ အဓိကမွဈကွီး ဖွဈသော မဲနမျ -ခြောငျဖရာမွဈက အလယျပိုငျး မှနေ၍ ထိုငျး ပငျလယျကှတှေ့ငျးသို့စီးဝငျသညျ။ ထို ပငျလယျကှကွေီ့းကို သုဝဏ်ဏဘူမိဖွဈမညျဟု စှဲလမျး ယုံကွညျ လကျြ ရှိပါသညျ။ ကြောကျခတျေ သဈကိုလှနျမွောကျပွီး ကွေးခတျေ၊ သံခတျေ( ဘီစီ၂၀၀၀-၅၀၀) ကိုရောကျလာသညျ့အခါ သကျရငျ့ တောငျတနျးကွီးဖွဈသော အရှရေို့းမတောငျတနျးမှ ငေ၊ှ ခဲ၊ သှပျ ၊ခဲ မဖွူ ၊ခနောကျစိမျး၊စသညျ့ အဖိုးတနျ တှငျးထှကျမြားအပွငျ သောငျပွငျမြားတှငျ ရှကေိုလညျးကငျြယူနိုငျသဖွငျ့ သုဝဏ်ဏဘူမိ ဟုထငျရှားခွငျးဖွဈသညျ။ထိုတောငျတနျးကွီး၏ အနောကျဖကျ ရှိ မုတ်တမ ပငျလယျကှတှေ့ငျ သုဝဏ်ဏဘူမိအစဉျအလာရှိသကဲ့သို့ အရှဖေ့ကျ ထိုငျးပငျလယျကှတှေ့ငျလညျး သုဝဏ်ဏဘူမိ အစဉျအလာ ရှိနသေညျ။ ယငျးအစဉျအလာကို ရှေးဟောငျး သုတသေန တူးဖျောမှုမြားက အထောကျအကူပွုပါသညျ။ထိုငျးတို့သညျ ဒေါနတောငျတနျးကွီး၏ အရှဖေ့ကျ တောငျခွေ မှ တစ်ဆဂေူ ( spirit cave) မှ ကြောကျခတျေဂူ အောငျးလူသားမြား၏ အထောကျအထားမြား ၊ဘနျကောကျ (Ban Kao)ရှာမှ ကြောကျခတျေသဈ ရှာဟောငျးကုနျး၊ ဒုံတားဖကျရှာမှ ကွေးနှငျ့ သံခတျေဦး ရှာဟောငျးကုနျးတို့ကို တူးဖျောတှရှေိ့ခဲ့သညျ။သံခတျေ ရှေးမွို့ဟောငျးယဉျကြေးမှုကို ဦးထောငျးမွို့ဟောငျး၊ နမျကှနျပထုံမွို့ဟောငျး၊ ကူဘူးဝါးမွို့ဟောငျနှငျ့ ပုနျတုတျမွို့ဟောငျးရာတို့တှငျတှရေ့သညျ။ထိုငျးပငျ လယျကှေ့ မွို့ဟောငျးမြား၏ ယဉျကြေးမှုကို ဒှါရဝတီ ယဉျကြေးမှုဟု လညျး ချေါပါ သညျ။ဒှါရဝတီ မွို့တျောကွီးကို သုဝဏ်ဏဘူမိ ဖွဈသညျဟု သကျသပွေရနျ သုတသေန အခကျြအလကျတို့ဖွငျ့ ထိုငျးတို့ ကွိုး ပမျးနကွေပါသညျ။သုဝဏ်ဏဘူမိမွို့ဟောငျးတညျနရောဌာန နရောဒသေကို ရှေးဟောငျးသုတသေနသမားမြားနှငျ့ သမိုငျး သုတသေီ မြားက အယူအဆကှဲပွားခဲ့ဖူးပါသညျ။အောကျမွနျမာနိုငျငံက သထုံဖွဈ သလား ၊ ထိုငျးတောငျပိုငျးက ခြိုငျးယ ( ဇယဘုမ်မိ) ဖွဈသလား၊ ထိုငျးအလယျပိုငျး လှငျပွငျမှ နမျကှမျပထုနျဖွဈသလား၊စူဖနျပူရီ သုဝဏ်ဏပူရီ ဖွဈသလားဟူသော အခကျြမြားပငျဖွဈသညျ။ထိုငျးနိုငျငံ ၏ ကြောငျးသုံးစာအုပျ ( text book)တှငျ အသောကခတျေနှငျ့ ခတျေပွိုငျ ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှု ပစ်စညျး မြားဖွဈကွသညျ့ ဓမ်မာစင်ျကွာလှညျးဘီး နှငျ့ သမငျပုံ ကြောကျဆဈ ရုပျကွီးကွောငျ့လညျးကောငျး အိန်ဒိယ နိုငျငံ ဆနျခြီပုထိုးတျောကွီး နှငျ့ပုံစံတူ စတေီတဈဆူရှိနခွေငျးကွောငျ့လညျးကောငျး ထောကျထားလြှငျ နမျကှမျပထုနျမှ သုဝဏ်ဏပူရီအထိ ဖွနျ့ကကျြ လကျြ ရှိနသေောဒသေကို သုဝဏ်ဏဘူမိ၏ ဗဟိုခကျြအဖွငျ့ သတျမှတျသညျဟု ထညျ့သှငျးသငျကွားခဲ့ပါသညျ။
မငျးသားကွီး ဒငျမရောငျး၏ အယူအဆ။
ထိုငျး သုတသေန အသငျးကို ထိုငျးဘုရငျ့တျောဝငျ မိသားစုမှ တညျထောငျ ခဲ့ပါသညျ။မငျးသားကွီး ဒငျမရောငျးသညျ( Prince Damrong) အသငျးကွီးတှငျ အယုဒ်ဓယမွို့တျော တညျထောငျပုံ ဟူသောစာတမျးကို ဦးစှာတငျသှငျးဖတျကွားခဲ့၍ ထိုငျးသုတသေန လှုပျရှားမှုကို ဦးဆောငျခဲ့သူဖွဈသညျ။မငျးသား ကွီးသညျ အောကျမွနျမာနိုငျငံမှ သထုံကို သုဝဏ်ဏဘူမိ ဟူသော သံသယစိတျနှငျ့ စိတျဝငျစားခဲ့၍ ၁၉၃၅ ခုနှဈတှငျ မွနျမာနိုငျငံ ပုဂံ ၊ ရနျကုနျနှငျ့ သထုံ တို့သို့ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လာရောကျ ကှငျးဆငျးလလေ့ာ ခဲ့သညျ။၎င်းငျးအမွငျ၌ သထုံမွို့ဟောငျးတှငျ ရှေးဟောငျး ယဉျကြေးမှု အဆောကျအအုံ အကွှငျးအကနျြ နညျးလှနျးသညျ ဟူ၍ဖွဈသညျ။မွနျမာနိုငျငံ သမိုငျးအကွောငျး ကြှမျးကငျြသူ ဆာဂြော့စကော့ထံမှလညျး သထုံအကွောငျးကို စုံ စမျးရာ သထုံတှငျ အစိုးရ ပွနျတမျးဝငျ ရှေးဟောငျး အဆောကျအအုံ အကွှငျးအကနျြမြား နညျးလှနျးသညျ ဟူသော အဖွကေို ရခဲ့သညျ။ထိုစဉျက စကော့သညျ အိန်ဒိယပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာန မှ(၁၈၈၃-၁၉၁၉) ခုနှဈအတှငျး ထုတျပွနျသော အမိနျ့အရ တနင်ျသာရီတိုငျးနှငျ့ မှနျပွညျနယျတို့တှငျ အစိုးရမှ တရားဝငျထုတျပွနျထားသော ဂဇေကျဝငျရှေးဟောငျး အဆောကျအအုံ ဟူ၍ ရှစောရံ( သထုံ) ၊ သိကွားဘုရား( သထုံ ) ၊ ဇငျးကြိုကျဘုရား(ဇငျးကြိုကျ) ၊ကော့ဂှနျးဂူဘုရား(ကော့ဂှနျး)၊ ဇှဲကပငျဘုရား( ဘားအံ) နှငျ့ ကြိုကျထီးရိုးဘုရား (ကငျပှနျးစခနျး) တို့သာရှိသညျဟု ဖွကွေားခဲ့ပါသညျ။ထို့ဖွငျ့ မငျးသားကွီးမှာ မိမိကိုယျတိုငျကလညျး ရှေးဟောငျးအဆောကျအအုံမြား မတှေ့ ရခွငျး ၊ သွဇာတိက်ကမရှိသူ ပညာရှငျတဈဦးကလညျး အတညျပွု ပေးခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ပုဂံခတျေ အနျောရထာမငျးကွီးနှငျ့ ခတျေပွိုငျ ထှနျးကားခဲ့သော သုဝဏ်ဏဘူမိသညျ မိမိနိုငျငံ( ထိုငျး) နိုငျငံ အတှငျး ရှိနကှနျပထုမျ မျွို့ဟောငျးသာဖွဈကွောငျး ယူဆသှား ခဲ့ပါသညျ။ထိုယူဆခကျြကို သကျသထေူနိုငျရနျ အတှကျ ပွငျသဈ ရှေးဟောငျးသုတသေန ပညာရှငျကွီး ဒူးပှနျ့ကို နကှနျပထုမျ မွို့ဟောငျးတူးဖျောမှုကို ဦးစီးစပွေီး ပရထုမျစတေီ ၊မွငျ့မိုရျတောငျစတေီ၊ အပါအဝငျ ရှေးဟောငျး ဌာနမြားကို သုတေ သနပွု ဖျောထုတျ စခေဲ့သညျ။ ကမ်ဗညျးကြောကျစာရှငျ ဂြော့ဆေး ဒေးက နကှနျပထုမျ မှ ယဓေမ်မာ ဂါထာ အုတျခှကျစာ လကျရေး ကိုလလေ့ာ၍ အဒေီ ၇- ရာစု ရကျစှဲကို သတျမှတျပေးခဲ့သညျ။ ဒူးပှနျ့ကလညျး မွငျ့မိုရျတောငျစတေီ ၏ပန်နကျ တောငျ ပုဂံကနျြစဈ သားမငျးကွီး၏ ကောငျးမှု အာနန်ဒာဂူဘုရား၏ ပန်နကျတျောနှငျ့ ဆငျတူကွောငျး ကောကျခကျြခပြေးခဲ့သညျ။ ယငျးအဖွတေို့ကိုထောကျထား၍ နကှနျပထုမျ သညျ ပုဂံနှငျ့ ခတျေပွိုငျထှနျးကားသော (သို့) ပုဂံ မတိုငျမီက မွို့တျောတဈခုဖွဈခဲ့ကွောငျး အနျောရထာမငျး လာရောကျတိုကျခိုကျသော သုဝဏ်ဏဘူမိမှာ နကှနျပထုမျ ဖွဈကွောငျး စဈခြီလာသော အနျောရထာမငျးနှငျ့အတူ သူရဲကောငျး ကနျြစဈသားသညျလိုကျပါလာ၍ မွငျ့မိုရျတောငျ စတေီ ကိုတှမွေ့ငျပွီး အာနန်ဒာဂူဘုရားကို ပုံစံတူတညျခဲ့ကွောငျး သမိုငျးကွောငျးကောကျခကျြခမြှုမြား ကွုံတှေ့ လာပါသညျ။သုဝဏ်ဏဘူမိသညျ သထုံတှငျမရှိ နမျကှမျပထုနျ တှငျသာ ရှိသညျ ဟုလညျး သတျမှတျလိုကျ ကွပါသညျ။ ထို့ပွငျ မငျးသားကွီး ဒမျရောငျးက ဖရာ့ ကြောကျဥတောငျးမငျးက အယုဒ်ဓယ နိုငျငံကို မတညျထောငျမီ ယိုးဒယားနိုငျငံသမိုငျးဟူသောစာတမျးကို ထိုငျး သုတသေနအသငျးဂြာနယျတှငျ တငျပွလိုကျပါသညျ။ဒေါကျတာ ကှာရဈဝေးလျ နှငျ့ ပေါဝဈတလေ ဆိုသူတို့ကလညျး ၎င်းငျး အယူအဆ နှငျ့ ဆငျတူရိုးမှား ဖျောပွလာကွပါသညျ။
နကှနျပထုမျ ၊ ဥထောငျး၊ ပုံထုတျ၊ကူဘူးဝါး၊ လော့ယူရီ၊မူဝငျဖရာ ရှတျ၊ ဒုံစရီမဟိုစှတျ၊ စရီထကျ၊ ဘနျခူမူဝငျ၊ စပျခနျြပါ၊ လနျဖုံး စသညျတို့သညျ ဒှါရဝတီ မွို့ဟောငျးတို့ဖွဈကွပါသညျ။ဒှါရဝတီမွို့ဟောငျးတို့တှငျတှရေ့သော ရှေးဟောငျး အဆောကျအအုံမြား၏ ဗိသုကာ လကျရာတို့ မှာ အိန်ဒိယ အရှမွေ့ောကျ ပိုငျး ဂုပ်ပတ ခတျေတှငျတှရေ့သော လကျရာ မြား ဖွဈကွောငျးသိရပါသညျ။ ကြောကျစာ ၊ ကွေးပွားစာ စသညျ့ စာ အရေးအသားမှာလညျး ဂုပ်ပတ ခတျေအရေးအသားမြား ဖွဈသညျ။ဗုဒ်ဓဆငျးတုတျောမြား လကျရာနှငျ့ ဓမ်မစင်ျကွာလှညျးဘီး လကျရာတို့မှာ ဗာရာဏသီ ၊ဆာရျနတျဒသေ အနုပညာ ဟနျမြိုး ဖွဈ၍ မောရိယ ခတျေအနုပညာ နှငျ့ ဆကျနှယျမှုရှိသညျ။
ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈကွီး ပွီးသှားပွီးနောကျ သမေငျးတမနျ ရထားလမျး ဖောကျလုပျရေး လုပျငနျးတှငျ ပါဝငျခဲ့သော ရှေးဟောငျး သုတသေန ပညာရှငျ ဒတျရျှလူမြိုး သုံ့ပနျး ဗီဟီ ကရေငျ ဆိုသူသညျ စဈအတှငျးတှငျ ဤဒသေ၌ ကြောကျခတျေ လကျနကျ ကရိယာ မြားကိုတှေ့ ရှိ ခဲ့ ရာမှ စဈပွီးသှား သောအခါ ထိုငျးအစိုးရကိုခှငျ့တောငျးပွီး သုတသေနပွုခှငျ့ ရသှားခဲ့သညျ။ ၎င်းငျး အခှငျ့အရေးမှာ အစဉျအလာ တဈခုလညျး ဖွဈသှားခဲ့ ပါသညျ။ ထိုငျး၊ အမရေိကနျ၊ သွစတေးလြ၊ ဗွိတိနျ နှငျ့ နယူး ဇီလနျ ရှေးဟောငျး သုတသေီမြားနှငျ့ပါ လကျတှဲဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ အထိ တိုးတကျခဲ့သညျ။ ဗီဟီကရေငျ၏ သမိုငျးမတငျမီ ခတျေ ရှာဖှတှေရှေိ့မှုမြားကွောငျ့ ထိုငျးတို့သညျလညျး သမိုငျးမ တငျမီခတျေကို အထူးစိတျဝငျစား၍ ရှေးမွို့ဟောငျး ဒှါရဝတီ ကို တူးဖျော၍သုတသေနပွုခွငျးမြားကို အရှိနျအဟုနျမွှငျ့ ဆောငျရှကျ ခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ ၁၉၅၃ မှ ၁၉၉၆အတှငျး ဒှါရဝတီ မွို့ဟောငျးရာပေါငျး ၁၃ ခုကို တူးဖျောသုတသေန ပွုနိုငျခဲ့သညျ။ နညျးပညာ အားသာခကျြမြား အငျမတနျကောငျးသော ပံ့ပိုးမှုမြား နှငျ့ ထိုငျးတို့၏ သုဝဏဘူမိ ရှာပုံတျောသညျ ဤမြှထိ ခရီးပေါကျနသေျောလညျး သထုံမွို့ဟောငျး အတှကျမူ တိမျခိုးမြားဖုံးလှမျး ခံရသလို မှုနျဝါးလှသညျ။ခတျေပွိုငျမှတျတမျး မြားထဲတှငျလညျး ဒှါရဝတီ ယဉျကြေးမှုသညျ သုဝဏ်ဏဘူမိ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ဆကျစပျလြှကျ ရှိပရော ရှေးဟောငျး ဗိသုကာလကျရာတို့မှာ ဆငျတူရိုးမှားဖွဈနသေညျမှာမဆနျးလှပေ ။ သို့သျော ထိုငျးသုတသေီတို့ တူးဖျောအဖွရှောခဲ့သလို သံသယ နရော အဖွဈသတျမှတျခွငျးခံရသော သထုံကို တူးဖျောအဖွရှော၍ ပျေါထှကျလာသော ရလာဒျမြားကို တျိုကျဆိုငျကွညျ့သငျ့ပါသညျ။ ထိုအခါမှ မညျသညျ့မွို့ဟောငျးသညျ သုဝဏ်ဏဘူမိ ဖွဈကွောငျး အတညျပွုသငျ့သညျမှာ သမိုငျးသုတသေီကောငျးတို့၏သိက်ခာ အမှနျပငျဖွဈသညျ။ ဤသို့အားဖွငျ့ နကှနျပထုမျ ကို သုဝဏ်ဏဘူမိ ဟုအတညျပွုလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ မွနျမာတို့အတှကျ ဂုဏျယူဖှယျ အလှနျရှေးကသြော ၊ ဘာသာရေး ကနဦး ပွယုဒျဖွဈသော မွနျမာ့ ပိုငျမွို့ ကွီးတဈခု၏ သမိုငျးကွောငျး အမှအေလု ခံလိုကျရခွငျး သညျ အိမျနီခငျြးဆိုးမြားကိုသာ အစဉျအဆကျပိုငျဆိုငျလာသော မွနျမာနိုငျငံကွီးအတှကျ မပွယျနိုငျသော ကြိနျစာတဈခု သာဖွဈတော့သညျ ။သို့သျော အမှစေဈသညျကား အမိမွအေပျေါ တှငျတညျရှိရိုးမှနျလြှငျ စနဈတကြ ဖျောထုတျ သငျ့သညျ။ မညျသို့သောရလာဒျ ပျေါထှကျလာသညျဖွဈစေ တညျငွိမျစှာ လကျခံပေးနိုငျစှမျး လညျးရှိရမညျ။ နောငျ ဆောငျးပါး မြားတှငျ ပညာရှငျမြား မညျသို့အငွငျးပှား၍ ရာမညတိုငျး၏ အဖိုးမဖွတျနိုငျသော ယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈ ဖွဈသော သုဝဏ်ဏဘူမိကို မညျသို့ ကြိုးစား ဖျောထုတျခဲ့ကွသညျကို ဆကျလကျဖျောပွပါဦးမညျ။
သထုံရာဇဝင်ပါအကြောင်းအရာတို့သည် ခေတ်ပြိုင် ကျောက်စာလည်းမဟုတ်၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းလည်းမဆိုသာ ၊ ဒဏ္ဍာရီပါ အကြောင်းအရာတို့ကို သမိုင်းနည်းဖြင့် အချိန်ကာလ၊ နေရာဒေသနှင့် အဖြစ်အပျက်များကို ထုတ်နှုတ်ပြီးဆန်းစစ် တင်ပြပါမည်။အချိန်ကာလအားဖြင့် ဗုဒ္ဓခေတ်နှင့် ဗုဒ္ဓလွန်ခေတ် အကြောင်းတို့ပါဝင်နေသည်။ သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံပြည်ကို ဗုဒ္ဓမြတ် စွာမပွင့်ခင်က တည်ထောင်ခဲ့သည်ဆိုထား၏။ တဖန် သိကြား ၊ ရသေ့ ၊ ဝိဇ္ဇာဓိုရ် တို့တည်ထောင်ခဲ့သော ပထမ နှင့် ဒုတိယ သုဓမ္မ ဝတီ တို့သည်လည်းပါဝင်လေရာ မြို့ရိုးခုနှစ်ထပ် ကျုံးခုနှစ်ထပ်ဖြင့် တည်ပေးခဲ့သည်ဟုမှတ်သားဖွယ်ရာ တွေ့ရသည်။ထို့ပြင်သထုံမြို့တွင် မြို့ရိုးအထပ်ထပ်ဖြင့် တည်ထား သောမြို့ဟောင်းရာများကို ကောင်းကင်ဓါတ်ပုံများမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပေသည်။ဥပမာ ကျိုက္ကရာ မြို့ဟောင်းအရာဆို လျှင် မြို့ရိုးခုနှစ်ထပ်ထက်မနည်း ရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဇုတ်သုတ်မြို့ဟောင်းတွင်လည်း မြို့ရိုးအထပ် များပါသည်။ ဤ မြို့ဟောင်းနှစ်မြို့မှာ အရွယ်အစား မသေးငယ်လှပေ။မြို့တည်ရာအနေအထားကလည်း ကောင်းသည်။ ကျိုက္ကသာ မှာ စစ်တောင်းမြစ်ဝတွင်ရှိပြီး ဇုတ်သုတ်မှာဘီးလင်းမြစ်ဝ တွင်ရှိသည်။ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုလက် ရာ အကြွင်းအကျန် များတွေ့ရှိရပါသည်။
ဒုတိယ သုဓမ္မဝတီမြို့သည်လည်း မြို့ရိုး ခုနှစ်ထပ် ကျုံး ခုနှစ်ထပ် ဖြင့်တည်ခဲ့သည်။ တည်ထောင်ချိန်ကို မသိရပေ။ဗုဒ္ဓဘုရား မပွင်မီ ဟုသာမှတ်ရသည်။ မြို့တည်သော နေရာ မှာ ရသေ့နှစ်ပါးသီတင်းသုံးရာတောင်နှစ်ခုကြား ဟုဆိုပြီး ထိုမြို့ အတွက် မြို့ဟောင်းရာ အတည်မပြုနိုင်သေးပေ။
တတိယ သုဓမ္မဝတီမြို့သည်လည်း တည်ထောင်သည့် ရက်စွဲ မသိရပေ။မြို့တည်သောနေရာမှာ ယခုသထုံမြို့ အရှေ့ က် တောင်တန်းကြီးမှ ဂေါ့တောင်၏မြောက်ဖက်အရပ် ဟုဆိုထား သည်။ယခုသထုံမြို့အနီးဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ အစနှစ်နှင့် အဆုံးနှစ် ကိုမသိ၍ မြို့ဟောင်းရာကိုလည်း အတည်မပြုနိုင်ပါ။
စတုတ္ထ သုဓမ္မဝတီမြို့သည် တတိယ သုဓမ္မဝတီမြို့နေရာမှာပင် အသစ်ထပ်မံတည်သောမြို့ ဖြစ်ပါသည်ဥကပေါက်သောလူသား အကြောင်းပါဝင်၍ ဒဏ္ဍာရီဆန်ပါသည်။ မြို့တည်ချိန်ကား ဗုဒ္ဓ ပွင့်ချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်ပါသည်။အိန္ဒိယ ကျမ်းစာများတွင် မပါဝင်သော ဂဝံပတိ ရဟန္တာ အကြောင်းပါဝင်နေ၍ သုတေသန အမြင်တွင်ပြောစရာဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော် ဂဝံပတိ ရဟန္တာ၏ အမည် သည် အိန္ဒိယတွင်မထင်ရှားလှပေ ။ပုဂံခေတ်မူလထိုး ကျောက်စာတချပ်တွင်တော့ ဂဝံတိ ရဟန္တာအမည်ပါရှိသည်။အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၊ သထုံဒေသ တွင်မတော့ ဂဝံပတိ ရဟန္တာသည် ၎င်းပင့်ဆောင်လာ၍ ယနေ့တိုင် ကိုးကွယ် နေကြ သော သွားတော်ဓါတ်တော်များ ၊ ဗုဒ္ဓ ဆံတော်များ ကြောင့် ဖယ်ထုတ်၍မရ နိုင်သော သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ် သည်။
ရှေးဟောင်း သုတေသနအမြင်နှင့်ဆိုလျှင် ဤစတုတ္ထ သုဓမ္မဝတီ မြို့သည် မြိုရိုး(၇) ထပ် ကျုံး(၇) ထပ် နှင့်တည်သည်။တည်သောခုနှစ်ကို အတိအကျသိရသည်။ မြို့တည်စဉ်ကာလ အတွင်း သမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက် များစွာရှိခဲ့သည်။သထုံနယ်မှ ဆံတော်စေတီ(၁၅) ဆူ၊ သွားတော် ဓါတ်စေတီ(၁၁)ဆူ၊ အမည်ထင်ရှားလျက် ယနေ့တိုင်တည်ရှိနေသည်။ ထို့ပြင် သုဝဏမင်းကြီး တည်ထားခဲ့သော ရွှေစာရံစေတီ၊ မြသပိတ်စေ တီ၊သရကလျာဏီကုန်းစေတီ၊ ဇံသီးစေတီ၊ နန်းတော်ဦးစေတီ၊ ရဟန္တာတိုက်တော်စသည့် အဆောက်အအုံများ ယနေ့တိုင်တည်ရှိနေသည်။ဤသည်တို့မှာ ရှေးဟောင်း သုတေသန နည်းဖြင့် စူးစမ်း လေ့လာအဖြေရှာရမည် ဖြစ်သည်။သထုံမြို့ဟောင်း မှမြို့ရိုးဟောင်းများကိုလည်း ဘီစီ-၅၈၂ တွင် တည်ခဲ့သလောဟု စနစ်တကျ စူးစမ်းလေ့လာ ဖော်ထုတ်သင့် ပါသည်။
ပဉ္စမ သုဓမ္မဝတီမြို့(ဥပဒေဝမြို့)သည် မြေမျိုသွားသော မြို့ရာ ဟောင်း၏တောင်ဖက် ကပ်လျှက် မြို့ရိုးသုံးထပ် ကျုံးသုံးထပ် ( ယခု သထုံမြို့ဟောင်းနေရာ)တွင်တည်ထား သည်ဟုဆို၏။
ဆဌမ သုဓမ္မဝတီမြို့( ဓညဝတီမြို့ )သည်ယခု မုတ္တမ မြို့အနီး တွင် ရှိသည်။ပဲခူး၊ ဟံသာဝတီ၊ တို့ကိုထူထောင်သော သမလ နှင့် ဝိမလ မင်းသားတို့၏ မွေးရပ်ဇာတိ လည်းဖြစ်သည်။ သထုံ နှင့် ပဲခူး ခေတ်ပြိုင်ထွန်းကားခဲ့ပုံကိုလည်း လေ့လာနိုင်သည်။ သုတေသန ပြုသင့်သော မြို့ဟောင်းနေရာဖြစ်သည်။
သတ္တမ သုဓမ္မဝတီမြို့ ( မရိုက်သဖုံးမြို့ ) ၊ အဌမ သုဓမ္မဝတီမြို့( ရွှေလောင်းမြို့ )၊ နဝမ သုဓမ္မဝတီမြို့တိုက်ကလား ( ဝင်းက ) ၊မူလ သုဓမ္မဝတီမှ မြောက်ဖက်သို့ ခွဲထွက်သွားသည်။ မရိုက်သဖုံး နှင့် ရွှေလောင်းမြို့တို့သည် တည်တံ့ချိန်တိုတောင်း၍ မထင်ရှား လှသော်လည်း နေရာမှာထင်ရှားရှိသည်။မရိုက်သဖုံး မြို့ဟောင်းမှ မရမ်းကုန်း ကတိုက်ကြီး ကတိုက်ကလေး တို့သည် မြန်မာပြည်တွင် ထူးခြားသော ထင်ရှားသော မြိ်ု့ဟောင်းရာများ ဖြစ်ကြသည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်း မြို့တည်ပုံ ဆန်းပြားသည်။ ကတိုက်ကြီး ကတိုက်ကလေး တို့သည် ဇုတ်သုတ်နှင့် ကျိုက္ကသာ မြို့ဟောင်း တို့နှင့် တူလှစွာ ခြေဖဝါး ( ပါဒ ) ပုံမျိုး ရှိ၍ဆန်းသည်။
တိုက်ကလား ( ဝင်းက ) မြို့ဟောင်းမှာ အရေးပါသော မြို့ ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့တွင် သီရိမာသောကမင်းလက်ထက် တွင် မဇ္ဈိမဒေသ ၊ ပါလိပုတ္တရ မြို့မှ သာသနာပြု ရဟန်းတော်များ အရှင်သောဏ နှင့် အရှင်ဥတ္တရတို့ ကြွရောက်လာကြောင်း ပဲခူး ကလျာဏီ ကျောက်စာ၌ ရေးထိုးခဲ့သောကြောင့် သမိုင်းဆရာများ အမျိုးမျိုး ဝေဖန် သုံးသပ်လျက် ရှိသော ပြဿနာလည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ အစောဆုံး ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင် ဒေါက်တာ အီးဖော်ခမ်းမား ကအရေးတယူ ပြု၍ ၁၉၇၆ မှ ၁၉၇၈ အတွင်း ကုန်းပေါင်း (၆) ကုန်းအား ရှေးဟောင်းသုတေသန နည်းဖြင့် တူး ဖော်သုတေသနပြုခဲ့သောမြို့ဟောင်း ဖြစ်သည်။ဘီစီ-၃၃၆ မှ ဘီစီ-၉၄ ထိ မြို့သက်ပေါင်း (၂၄၂) နှစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒဿမ သုဓမ္မဝတီမြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိမြို့ မှာ အရေးအပါဆုံးသော မြို့ဖြစ်သည်။ဘီစီ-၉၄ မှ ဘီစီ - ၁၀၅၇ အထိ နှစ်ပေါင်း ၁၁၅၀ နှစ်တိုင် တည်တံ့ခဲ့သော မြန်မာ့ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး ရှေးမြို့တော် ကြီးဖြစ်သည်။ မင်းဆက်ပေါင်း (၄၈) ဆက်အုပ်စိုးခဲ့ပြီး မြို့နေရာ အတိအကျ ရှိ၍ မြို့ဟောင်းရာ ကျုံးရာ နန်းတော်ကုန်းဟောင်း များ အထင်အရှားရှိသည်။ရွှေစာရံ ၊ပိဋကတ်တိုက် ၊ဖောင်တော်ဦး ဘုရား ၊သိကြားဘုရား၊ ကလျာဏီကျောက်စာ၊ ရှေးဟောင်း ကျောက်စာတိုင် အကြွင်းအကျန်များ သည် ယခုသထုံမြို့သစ် နေရာတွင် ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် သထုံတွင် မတင်မကျ ပြဿ နာပေါင်း မြောက်များစွာရှိနေသည် ။ ရှေးဟောင်းသုတေသန တူးဖော်နည်းများဖြင့် စနစ်တကျ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။
ခေတ်ပြိုင်အယူအဆ နှင့် ထိုင်းတို့၏ သုဝဏဘူမိ။
မွန်တို့၏ အိမ်နီးချင်းဒေသ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ရှမ်းရိုးမ၊ ဒေါန တောင်တန်းနှင့် တနင်္သာရီ တောင်တန်းတို့၏ တဖက်တွင်ရှိ၍ ရေမြေ အနေအထား ကွာခြားမှုမရှိလှပါ ။လေကွယ်ဖက် ရောက်ရှိ နေ၍ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့တွင်ရှိသော သထုံဒေသ ထက် မုတ်သုံမိုး ထက်ဝက်ခန့် လျော့နည်း သည်။ အဓိကမြစ်ကြီး ဖြစ်သော မဲနမ် -ချောင်ဖရာမြစ်က အလယ်ပိုင်း မှနေ၍ ထိုင်း ပင်လယ်ကွေ့တွင်းသို့စီးဝင်သည်။ ထို ပင်လယ်ကွေ့ကြီးကို သုဝဏ္ဏဘူမိဖြစ်မည်ဟု စွဲလမ်း ယုံကြည် လျက် ရှိပါသည်။ ကျောက်ခေတ် သစ်ကိုလွန်မြောက်ပြီး ကြေးခေတ်၊ သံခေတ်( ဘီစီ၂၀၀၀-၅၀၀) ကိုရောက်လာသည့်အခါ သက်ရင့် တောင်တန်းကြီးဖြစ်သော အရှေ့ရိုးမတောင်တန်းမှ ငေ၊ွ ခဲ၊ သွပ် ၊ခဲ မဖြူ ၊ခနောက်စိမ်း၊စသည့် အဖိုးတန် တွင်းထွက်များအပြင် သောင်ပြင်များတွင် ရွှေကိုလည်းကျင်ယူနိုင်သဖြင့် သုဝဏ္ဏဘူမိ ဟုထင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုတောင်တန်းကြီး၏ အနောက်ဖက် ရှိ မုတ္တမ ပင်လယ်ကွေ့တွင် သုဝဏ္ဏဘူမိအစဉ်အလာရှိသကဲ့သို့ အရှေ့ဖက် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့တွင်လည်း သုဝဏ္ဏဘူမိ အစဉ်အလာ ရှိနေသည်။ ယင်းအစဉ်အလာကို ရှေးဟောင်း သုတေသန တူးဖော်မှုများက အထောက်အကူပြုပါသည်။ထိုင်းတို့သည် ဒေါနတောင်တန်းကြီး၏ အရှေ့ဖက် တောင်ခြေ မှ တစ္ဆေဂူ ( spirit cave) မှ ကျောက်ခေတ်ဂူ အောင်းလူသားများ၏ အထောက်အထားများ ၊ဘန်ကောက် (Ban Kao)ရွာမှ ကျောက်ခေတ်သစ် ရွာဟောင်းကုန်း၊ ဒုံတားဖက်ရွာမှ ကြေးနှင့် သံခေတ်ဦး ရွာဟောင်းကုန်းတို့ကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။သံခေတ် ရှေးမြို့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကို ဦးထောင်းမြို့ဟောင်း၊ နမ်ကွန်ပထုံမြို့ဟောင်း၊ ကူဘူးဝါးမြို့ဟောင်နှင့် ပုန်တုတ်မြို့ဟောင်းရာတို့တွင်တွေ့ရသည်။ထိုင်းပင် လယ်ကွေ့ မြို့ဟောင်းများ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ဒွါရဝတီ ယဉ်ကျေးမှုဟု လည်း ခေါ်ပါ သည်။ဒွါရဝတီ မြို့တော်ကြီးကို သုဝဏ္ဏဘူမိ ဖြစ်သည်ဟု သက်သေပြရန် သုတေသန အချက်အလက်တို့ဖြင့် ထိုင်းတို့ ကြိုး ပမ်းနေကြပါသည်။သုဝဏ္ဏဘူမိမြို့ဟောင်းတည်နေရာဌာန နေရာဒေသကို ရှေးဟောင်းသုတေသနသမားများနှင့် သမိုင်း သုတေသီ များက အယူအဆကွဲပြားခဲ့ဖူးပါသည်။အောက်မြန်မာနိုင်ငံက သထုံဖြစ် သလား ၊ ထိုင်းတောင်ပိုင်းက ချိုင်းယ ( ဇယဘုမ္မိ) ဖြစ်သလား၊ ထိုင်းအလယ်ပိုင်း လွင်ပြင်မှ နမ်ကွမ်ပထုန်ဖြစ်သလား၊စူဖန်ပူရီ သုဝဏ္ဏပူရီ ဖြစ်သလားဟူသော အချက်များပင်ဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံ ၏ ကျောင်းသုံးစာအုပ် ( text book)တွင် အသောကခေတ်နှင့် ခေတ်ပြိုင် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်း များဖြစ်ကြသည့် ဓမ္မာစင်္ကြာလှည်းဘီး နှင့် သမင်ပုံ ကျောက်ဆစ် ရုပ်ကြီးကြောင့်လည်းကောင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ဆန်ချီပုထိုးတော်ကြီး နှင့်ပုံစံတူ စေတီတစ်ဆူရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ထောက်ထားလျှင် နမ်ကွမ်ပထုန်မှ သုဝဏ္ဏပူရီအထိ ဖြန့်ကျက် လျက် ရှိနေသောဒေသကို သုဝဏ္ဏဘူမိ၏ ဗဟိုချက်အဖြင့် သတ်မှတ်သည်ဟု ထည့်သွင်းသင်ကြားခဲ့ပါသည်။
မင်းသားကြီး ဒင်မရောင်း၏ အယူအဆ။
ထိုင်း သုတေသန အသင်းကို ထိုင်းဘုရင့်တော်ဝင် မိသားစုမှ တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။မင်းသားကြီး ဒင်မရောင်းသည်( Prince Damrong) အသင်းကြီးတွင် အယုဒ္ဓယမြို့တော် တည်ထောင်ပုံ ဟူသောစာတမ်းကို ဦးစွာတင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့၍ ထိုင်းသုတေသန လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။မင်းသား ကြီးသည် အောက်မြန်မာနိုင်ငံမှ သထုံကို သုဝဏ္ဏဘူမိ ဟူသော သံသယစိတ်နှင့် စိတ်ဝင်စားခဲ့၍ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံ ၊ ရန်ကုန်နှင့် သထုံ တို့သို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက် ကွင်းဆင်းလေ့လာ ခဲ့သည်။၎င်းအမြင်၌ သထုံမြို့ဟောင်းတွင် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အဆောက်အအုံ အကြွင်းအကျန် နည်းလွန်းသည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းအကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူ ဆာဂျော့စကော့ထံမှလည်း သထုံအကြောင်းကို စုံ စမ်းရာ သထုံတွင် အစိုးရ ပြန်တမ်းဝင် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ အကြွင်းအကျန်များ နည်းလွန်းသည် ဟူသော အဖြေကို ရခဲ့သည်။ထိုစဉ်က စကော့သည် အိန္ဒိယပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ(၁၈၈၃-၁၉၁၉) ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်သော အမိန့်အရ တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် အစိုးရမှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော ဂေဇက်ဝင်ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ဟူ၍ ရွှေစာရံ( သထုံ) ၊ သိကြားဘုရား( သထုံ ) ၊ ဇင်းကျိုက်ဘုရား(ဇင်းကျိုက်) ၊ကော့ဂွန်းဂူဘုရား(ကော့ဂွန်း)၊ ဇွဲကပင်ဘုရား( ဘားအံ) နှင့် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား (ကင်ပွန်းစခန်း) တို့သာရှိသည်ဟု ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ထို့ဖြင့် မင်းသားကြီးမှာ မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများ မတွေ့ ရခြင်း ၊ သြဇာတိက္ကမရှိသူ ပညာရှင်တစ်ဦးကလည်း အတည်ပြု ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ပုဂံခေတ် အနော်ရထာမင်းကြီးနှင့် ခေတ်ပြိုင် ထွန်းကားခဲ့သော သုဝဏ္ဏဘူမိသည် မိမိနိုင်ငံ( ထိုင်း) နိုင်ငံ အတွင်း ရှိနကွန်ပထုမ် မြိ်ု့ဟောင်းသာဖြစ်ကြောင်း ယူဆသွား ခဲ့ပါသည်။ထိုယူဆချက်ကို သက်သေထူနိုင်ရန် အတွက် ပြင်သစ် ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်ကြီး ဒူးပွန့်ကို နကွန်ပထုမ် မြို့ဟောင်းတူးဖော်မှုကို ဦးစီးစေပြီး ပရထုမ်စေတီ ၊မြင့်မိုရ်တောင်စေတီ၊ အပါအဝင် ရှေးဟောင်း ဌာနများကို သုတေ သနပြု ဖော်ထုတ် စေခဲ့သည်။ ကမ္ဗည်းကျောက်စာရှင် ဂျော့ဆေး ဒေးက နကွန်ပထုမ် မှ ယေဓမ္မာ ဂါထာ အုတ်ခွက်စာ လက်ရေး ကိုလေ့လာ၍ အေဒီ ၇- ရာစု ရက်စွဲကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ဒူးပွန့်ကလည်း မြင့်မိုရ်တောင်စေတီ ၏ပန္နက် တောင် ပုဂံကျန်စစ် သားမင်းကြီး၏ ကောင်းမှု အာနန္ဒာဂူဘုရား၏ ပန္နက်တော်နှင့် ဆင်တူကြောင်း ကောက်ချက်ချပေးခဲ့သည်။ ယင်းအဖြေတို့ကိုထောက်ထား၍ နကွန်ပထုမ် သည် ပုဂံနှင့် ခေတ်ပြိုင်ထွန်းကားသော (သို့) ပုဂံ မတိုင်မီက မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အနော်ရထာမင်း လာရောက်တိုက်ခိုက်သော သုဝဏ္ဏဘူမိမှာ နကွန်ပထုမ် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ချီလာသော အနော်ရထာမင်းနှင့်အတူ သူရဲကောင်း ကျန်စစ်သားသည်လိုက်ပါလာ၍ မြင့်မိုရ်တောင် စေတီ ကိုတွေ့မြင်ပြီး အာနန္ဒာဂူဘုရားကို ပုံစံတူတည်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းကြောင်းကောက်ချက်ချမှုများ ကြုံတွေ့ လာပါသည်။သုဝဏ္ဏဘူမိသည် သထုံတွင်မရှိ နမ်ကွမ်ပထုန် တွင်သာ ရှိသည် ဟုလည်း သတ်မှတ်လိုက် ကြပါသည်။ ထို့ပြင် မင်းသားကြီး ဒမ်ရောင်းက ဖရာ့ ကျောက်ဥတောင်းမင်းက အယုဒ္ဓယ နိုင်ငံကို မတည်ထောင်မီ ယိုးဒယားနိုင်ငံသမိုင်းဟူသောစာတမ်းကို ထိုင်း သုတေသနအသင်းဂျာနယ်တွင် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ဒေါက်တာ ကွာရစ်ဝေးလ် နှင့် ပေါဝစ်တလေ ဆိုသူတို့ကလည်း ၎င်း အယူအဆ နှင့် ဆင်တူရိုးမှား ဖော်ပြလာကြပါသည်။
နကွန်ပထုမ် ၊ ဥထောင်း၊ ပုံထုတ်၊ကူဘူးဝါး၊ လော့ယူရီ၊မူဝင်ဖရာ ရွတ်၊ ဒုံစရီမဟိုစွတ်၊ စရီထက်၊ ဘန်ခူမူဝင်၊ စပ်ချန်ပါ၊ လန်ဖုံး စသည်တို့သည် ဒွါရဝတီ မြို့ဟောင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ဒွါရဝတီမြို့ဟောင်းတို့တွင်တွေ့ရသော ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံများ၏ ဗိသုကာ လက်ရာတို့ မှာ အိန္ဒိယ အရှေ့မြောက် ပိုင်း ဂုပ္ပတ ခေတ်တွင်တွေ့ရသော လက်ရာ များ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ ကျောက်စာ ၊ ကြေးပြားစာ စသည့် စာ အရေးအသားမှာလည်း ဂုပ္ပတ ခေတ်အရေးအသားများ ဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ လက်ရာနှင့် ဓမ္မစင်္ကြာလှည်းဘီး လက်ရာတို့မှာ ဗာရာဏသီ ၊ဆာရ်နတ်ဒေသ အနုပညာ ဟန်မျိုး ဖြစ်၍ မောရိယ ခေတ်အနုပညာ နှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးသွားပြီးနောက် သေမင်းတမန် ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင် ဒတ်ရ်ှလူမျိုး သုံ့ပန်း ဗီဟီ ကေရင် ဆိုသူသည် စစ်အတွင်းတွင် ဤဒေသ၌ ကျောက်ခေတ် လက်နက် ကရိယာ များကိုတွေ့ ရှိ ခဲ့ ရာမှ စစ်ပြီးသွား သောအခါ ထိုင်းအစိုးရကိုခွင့်တောင်းပြီး သုတေသနပြုခွင့် ရသွားခဲ့သည်။ ၎င်း အခွင့်အရေးမှာ အစဉ်အလာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သွားခဲ့ ပါသည်။ ထိုင်း၊ အမေရိကန်၊ သြစတေးလျ၊ ဗြိတိန် နှင့် နယူး ဇီလန် ရှေးဟောင်း သုတေသီများနှင့်ပါ လက်တွဲဆောင်ရွက် ခဲ့သည် အထိ တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဗီဟီကေရင်၏ သမိုင်းမတင်မီ ခေတ် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကြောင့် ထိုင်းတို့သည်လည်း သမိုင်းမ တင်မီခေတ်ကို အထူးစိတ်ဝင်စား၍ ရှေးမြို့ဟောင်း ဒွါရဝတီ ကို တူးဖော်၍သုတေသနပြုခြင်းများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၅၃ မှ ၁၉၉၆အတွင်း ဒွါရဝတီ မြို့ဟောင်းရာပေါင်း ၁၃ ခုကို တူးဖော်သုတေသန ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ နည်းပညာ အားသာချက်များ အင်မတန်ကောင်းသော ပံ့ပိုးမှုများ နှင့် ထိုင်းတို့၏ သုဝဏဘူမိ ရှာပုံတော်သည် ဤမျှထိ ခရီးပေါက်နေသော်လည်း သထုံမြို့ဟောင်း အတွက်မူ တိမ်ခိုးများဖုံးလွှမ်း ခံရသလို မှုန်ဝါးလှသည်။ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်း များထဲတွင်လည်း ဒွါရဝတီ ယဉ်ကျေးမှုသည် သုဝဏ္ဏဘူမိ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျှက် ရှိပေရာ ရှေးဟောင်း ဗိသုကာလက်ရာတို့မှာ ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်နေသည်မှာမဆန်းလှပေ ။ သို့သော် ထိုင်းသုတေသီတို့ တူးဖော်အဖြေရှာခဲ့သလို သံသယ နေရာ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော သထုံကို တူးဖော်အဖြေရှာ၍ ပေါ်ထွက်လာသော ရလာဒ်များကို တ်ိုက်ဆိုင်ကြည့်သင့်ပါသည်။ ထိုအခါမှ မည်သည့်မြို့ဟောင်းသည် သုဝဏ္ဏဘူမိ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသင့်သည်မှာ သမိုင်းသုတေသီကောင်းတို့၏သိက္ခာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် နကွန်ပထုမ် ကို သုဝဏ္ဏဘူမိ ဟုအတည်ပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာတို့အတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ် အလွန်ရှေးကျသော ၊ ဘာသာရေး ကနဦး ပြယုဒ်ဖြစ်သော မြန်မာ့ ပိုင်မြို့ ကြီးတစ်ခု၏ သမိုင်းကြောင်း အမွေအလု ခံလိုက်ရခြင်း သည် အိမ်နီချင်းဆိုးများကိုသာ အစဉ်အဆက်ပိုင်ဆိုင်လာသော မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက် မပြယ်နိုင်သော ကျိန်စာတစ်ခု သာဖြစ်တော့သည် ။သို့သော် အမွေစစ်သည်ကား အမိမြေအပေါ် တွင်တည်ရှိရိုးမှန်လျှင် စနစ်တကျ ဖော်ထုတ် သင့်သည်။ မည်သို့သောရလာဒ် ပေါ်ထွက်လာသည်ဖြစ်စေ တည်ငြိမ်စွာ လက်ခံပေးနိုင်စွမ်း လည်းရှိရမည်။ နောင် ဆောင်းပါး များတွင် ပညာရှင်များ မည်သို့အငြင်းပွား၍ ရာမညတိုင်း၏ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် ဖြစ်သော သုဝဏ္ဏဘူမိကို မည်သို့ ကျိုးစား ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမည်။
Posted By bawathit.blogspot.com at 2/22/2019 06:21:00 PM No comments:
Posted By bawathit.blogspot.com at 2/22/2019 06:15:00 PM No comments:
Autoimmune(Daw Khin Nwe Win Page)
Posted By bawathit.blogspot.com at 2/14/2019 06:59:00 PM No comments:
Labels: To A Better Health
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာ (ကျောက်အိုင်တောရ)
Posted by Khin Win on Thursday, May 28, 2015
အသည်းကင်ဆာ အဆင့် ၄ အမျိုးသမီး ငယ် လေး တစ်ဦး
မိတ္ထီလာ မြို့ မှ ဆရာဝန် မလေး တစ်ဦး ၏ ခံစား ချက် များ -----To A Better Health Page
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာ(ဆရာကြီး ဦးကျော်လှိုင်
ဆရာတော် အရှင်ဇဋိလ သီလပေးတရားတော်
ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသော ဟင်းချက်နည်းများ
ခွေးလှေးယားစေ့ အနက်နှင့် ဆေးဖက်ဝင်ခြင်း
အသက်ရှည် ကျန်းမာရေးအတွက် ရဿယနဆေးဝါးကို စားသုံးထိုက်ခြင်း
ပါစကတေဇော ခေါ်ဝမ်းမီး ၂
အသည်းရောဂါရှင်များအတွက် ကျန်းမာရေး ဓာတ်စာများ
အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာနှင့် တွဲဖက်ကုထုံးများ
HIV/AIDS ရောဂါအတွက် ကမ္ဘာ့ရိုးရာဆေးပညာသုံး တွဲဖက်ကုထုံးများ
အမတ နာဠိကေရ အသက်ရှည်ဆေး
ကျန်းမာသက်ရှည်ရေးအတွက် ဥတုအလိုက် ရှောင်ကြည်လိုက်နာရန် အချက်များ
မအို မနာ မသေ ရဿယနဆေး
ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာ ဘိဝံသ
`အနုမောဒနာ သွဝါဒ´ တရားတျော(၃) - *Active * No *Video Cover * *YouTube Video * Embedded video for `အနုမောဒနာ သွဝါဒ´ တရားတျော(၃)
ဆရာကွီး ဦးကြျောလှိုငျ -
AUTOIMMUNE ရောဂါ များ ကို အောင် နိုင် စေရန် အဓိက လိုက် နာ ရ မည့် အချက် များ ———- - အပိုင်း ၂ AUTOIMMUNE ရောဂါ များ ကို အောင် နိုင် စေရန် အဓိက လိုက် နာ ရ မည့် အချက် များ ———- ၁.အစားအသောက် ကို အဓိက ပြုပြင် ရ ပါ မည်။ ၂. အစား အသောက် နှင်...
Ultimate Gateway to Theravada Dhamma MP3, eBooks, Dhamma Songs, Videos Many More!! | www.dhammaransi.com
Galaxy S4 Mini GT-I9195 CWM Recovery & Root - မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ samsung galaxy s4 mini လေးကို recovery နဲ့ Root ပြုလုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ အရင်တုန်းက samsung တွေကို Recov...
Company list - YSX
To A Better Health(Web Page)
To A better Health(facebook page)
7 Daynews Journal
english songs for speaking lessons
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့ 
အမေ့ အိမ်(Mother's Home)
( " ဒါ ..... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကားနော်၊ မင်းတို့ သမိုင်းဝင်သွားမယ်” )
၀ိပဿနာ ယာနိက သင်္ခေပ ဓမ္မကထာ(ဦးကျော်လှိုင်)
Air bagan photos
android practical ebook
facebook account lock recovery
how to train english
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ရောင်ခြည်တော်ကွန့် မြူးပုံတော်
ဈာန်ပျံ ရဟန်းတော် ဗီဒီယို
ထန်းတပင်ကျေးရွာရှိ ထူးခြားစွာ ပျံလွန်ခဲ့သော သံဃာတော်တစ်ပါး
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး (အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ဆုံးရှုံးနေသော အမွေကို )
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပြောကြားမည့် အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းအကြို ကောက်နုတ်ချက်များ
လင်းတဌက်များ ရွှေတိဂုံဘုရား နားခို သတင်း
လင်းတဌက်များ ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် နားခို
သင်္ခတဓာတ်မှ အသင်္ခတဓာတ် သို့ ကူးပြောင်းပုံ(ဦးကျော်လှိုင်)
သမ္မတအိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမှု (ရုပ်/သံ)
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းကောက်နှုတ်ချက်
ရေကူး ပြီးတော့ မြကျွန်းသာ(Eleven Media Group)
Hein Zaw | Create Your Badge
To A Better Health (3)
ဆရာကြီးဦးကျော်လှိုင် တရားတော်များ (7)
ဆရာတော် ဓာတ်ပုံများ (1)
ဆရာတော် အရှင်ဇဋိလ တရားတော်များ (3)
မြန်မာ့သဘာဝ ရှူခင်း (2)
ဆေးနည်း ၁ (7)
ဒေသနာ တရားတော်များ (5)
မြန်မာ့ဆေးကိုယုံရင် ဒီလိုစနစ်တကျ သောက်ကြည့်လိုက်ပါ စိတ်ကူးပေါက်ရင်တင်မယ်မယ်လို့ပြောခဲ့ ပါတယ်၁၉၉၅မှ၂၀၀၀ထိကုသ့ပေးခဲတဲ့ ကျ နော့်လူနာဟောင...
ခှေးလှေးယားစအေ့နကျ နှငျ့ ဆေးဖကျဝငျခွငျး
အထကျ က ပုံတှကေတော့ ခှေးလှေးယားစအေ့နကျ အသီးတောငျ့နဲ့ အစပေုံ့တှပေါ။ ခှေးလှေးယားစေ့ အနကျစနေဲ့ ပတျသကျလို့ ကနြျောကြောငျးသားဘ...
မြန်မာ့ဆေးစွမ်းကောင်းများကို နှစ်သက်မြတ်နိုးကြကုန်သော မိတ်ဆွေများအတွက် ယခုစာအုပ်ငယ်ကို ဓာတ်ပုံဖြင့် PDF ပြုလုပ်၍ မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ဒေါင...
ကနျြးမာရေးအတှကျ အထောကျအပံ့ဖွဈစသေော ဟငျးခကျြနညျးမြား
၁။ သကျကွီးတိုငျးနှငျ့သငျ့သညျ့ က ကတဈခွောကျဆီပွနျ ကကတဈခွောကျ ၅ဝသား ခရမျးခဉျြသီး ...
ရှားစောင်းလက်ပတ် (Aloe vera)
(အူမကြီးကိုသန့်စင်ပေးရာတွင် အလွန်အစွမ်းထက်သည်) ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်သိပ်ကို အသုံးဝင် သော၊တန်ဖိုးရှိသော ၊ချစ်စရာကောင်း သောအပင်လေးဖြ...
0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ
စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. ဖတ်ချင်သမျှ စာအုပ်အားလုံးနီးပါးဖတ်ရမယ် မာတိကာ သို့မဟုတ် ရှာဖွေရန် (အပေါ်ပိုင်း တွင် အမျိုးအစားလိုက်ရှာနို...
ဆနွင်း စင်စစ် နနွင်း၏ မူလရိုးရာဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ် မှာ ဆနွင်းဖြစ်၏။အဆိုပါဆနွင်း၏ မူလရင်းမြစ်မှာ ဆန၀ ဟူသည့် ဝေါဟာရပင်ဖြစ်၏။...
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော် တဘောင်များ ============================== ၁) မီးကုန်ယမ်းကုန် ရိက္ခာကုန် တပ်တွင်းသူပုန်ထလိမ့်မည်။ ၂) သူပုန်ထကာ မ...
BUDDHA Movie မြန်မာစာတန်းထိုး
အပိုင်း-၁ အပိုင်း-၂ credit to:nepalimyanmar thearter from YouTube
► 1/7/12 - 8/7/12 (1)
► 1/12/13 - 8/12/13 (9)
► 21/9/14 - 28/9/14 (3)
► 29/3/15 - 5/4/15 (3)
► 12/4/15 - 19/4/15 (3)
► 10/2/19 - 17/2/19 (10)
▼ 17/2/19 - 24/2/19 (2)
စာစုများ (18) တိုင်းရင်းဆေး (15) ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ (8) ဆရာကြီးဦးကျော်လှိုင် တရားတော်များ (7) တရားစာပေ (7) ဆေးနည်း ၁ (7) ဒေသနာ တရားတော်များ (5) သတင်း (4) To A Better Health (3) health (3) ဆရာတော် အရှင်ဇဋိလ တရားတော်များ (3) ဓမ္မတေးသီချင်းများ (3) ဘာသာရေးစာစုများ (2) မင်္ဂလာချိန်ခါ (2) သဘာဝအစားအစာ (2) မြန်မာ့တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီများ (2) မြန်မာ့သဘာဝ ရှူခင်း (2) ဆရာတော် ဓာတ်ပုံများ (1) မိုးလေ၀သအခြေအနေ (1) လုပ်ငန်းသုံးစာအုပ်များ (1) သမိုင်းဆိုင်ရာ (1) အသည်းကုထုံး (1) အမေ့မှတ်တမ်း (1) ဆေးပင်ဓာတ်ပုံများ (1) မြန်မာ့အလှ (1)
အမိူးသမီးများမီးယပ်ရောဂါ (သွေးဆုးံခါနီးကြိုတင်ကာကွယ်သောက်သင့် ဆေးနည်းလေးများ)
အပိုင်း(၂) အမိူးသမီးတို့သိကောင်းစရာမီးရပ် (သို့မဟုတ်)မီးယပ်ရောဂါအကြောင်း
အမိူးသမီးတိုသိကောင်းစရာမီးရပ် (သို့မဟုတ်)မီးယပ်ရောဂါအကြောင်း ပထမပိုင်း(၁)
အပိုင်း(၁) ဒူလာရောဂါနိဒါန်း (ယောက်ကျားဒူလာ-သိကောင်းစရာ)
အပိုင်(၂) ယောက်ကျား-ဒူလာ သိကောင်းစရာ
၁၃၇၇ ခုနှစ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၃)
၁၃၇၇ ခုနှစ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၂)
၁၃၇၇ ခုနှစ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
မြန်မာကံကြမ္မာ နှစ် ၁၀၀ အပိုင်း(၃)
မြန်မာကံကြမ္မာ နှစ် ၁၀၀ အပိုင်း(၂)
မြန်မာကံကြမ္မာ နှစ် ၁၀၀ အပိုင်း(၁)
Bangan Keyboard Pro(perfect) activated